မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: မြန်မာလူမျိုးတိုင်းသိသင့် စရာ အသည်းရောင်ဘီပိုးနှင့် အသည်းကင်ဆာ
မြန်မာလူမျိုးတိုင်းသိသင့် စရာ အသည်းရောင်ဘီပိုးနှင့် အသည်းကင်ဆာ
ဘလော့ဂါလေးရေးထားတဲ့ အသည်းရောင်ဘီပိုးအကြောင်း အနည်းအကျဉ်းဆိုတာကိုလဲ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ကိုယ်တိုင် ဆရာဝန်မဟုတ်ပေမဲ့ လဲ ကိုယ်ချစ်ခဲ့ ဖူးသူက ဘီပိုးရှိတယ်ဆိုတော့ ဒီအကြောင်းလေးကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သိချင်လို့ လေ့လာမိရာက ဖိုရမ်ထဲမှာ ဆရာဝန်တစ်ယောက်က ဘာသာပြန်တင်ပေးထားတာမလို့ ခုအချိန်ရတုန်းလေး ရိုက်တင်ပြီး ဝေမျှလိုက်တာပါ။အသည်းရောင် ရောဂါ ဘီဗိုင်းရပ်စ် (ဘီပိုး အကြောင်းသိကောင်းစရာ)မြန်မာလူမျိုးတိုင်းသိသင့် စရာ အသည်းရောင်ဘီပိုးနှင့် အသည်းကင်ဆာအသည်းရောင်ရောဂါ ဘီဗိုင်းရပ်စ် (ဘီပိုး ဆိုတာဘာလဲ)“ဘီပိုးသည် အဖြစ်အများဆုံးနှင့် အဆိုးရွားဆုံး အသည်းရောဂါဖြစ်သည်။အသည်းကင်ဆာနှင့် အသည်းပျက်စီးခြင်းများ ဖြစ်ကာ အသက်တိုနိုင်သည်။မြန်မာလူမျိုး ဆယ်ယောက်လောက်တွင် တစ်ယောက် နာတာရှည်(ရာသက်ပန်) အသည်းရောင် ရောဂါ ဘီပိုး ရှိနိုင်ပါသည်။အများစုမှာ ရောဂါရှိ၍ရှိမှန်း မသိကြပါ။ရောဂါရှိသူ လေးယောက်တွင် တစ်ယောက် အသည်းကင်ဆာ အသည်းပျက်စီးမှုကြောင့် သေနိုင်ပါသည်။ ထိထိရောက်ရောက် ကြတ်မတ်ကုသပါလျှင် အသည်းပျက်စီးမှုမရှိအောင် ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။သင်ရောဂါရှိစေကာမူ ကျန်းမာနေသည်ဟု ထင်တတ်ပါသည်။”“ဘီပိုးသည် ရံဖန်ရံခါ ရောဂါလက္ခဏာ မပြတတ်သောကြောင့် ကြောက်စရာ ကောင်းပါသည်။ အသည်းစစ်ဆေးမှု အဖြေမှာပုံမှန် ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ အသည်းရောဂါ လက္ခဏာပြသော အချိန် (ဗိုက်နာခြင်း၊ အသားဝါခြင်း၊ မျက်လုံးဝါခြင်း၊ ဆီးမဲခြင်းများ တွင် ထိရောက်သော ကုသမှု ရစေကာမူ နောက်ကျတတ်ပါသည်။”ရောဂါကူးစက်မှု HIV အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။၁။ အမေမှ ကလေးသို့ ကူးစက်ခြင်းဘီပိုးသည် အမေမှ ကလေးသို့ မီးဖွားချိန်တွင် ကူးစက်မှု အများဆုံး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။၂။ သွေးမှ တဆင့် ကူးစက်ခြင်းဘီပိုးသည် ရောဂါပိုးရှိသော သွေးမှ တဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ ကူးစက်ပုံများမှာ- အနာနှင့် အနာ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ မှု- မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓါးနှင့် သွားပွတ်တံများ စုပေါင်း၍သုံးခြင်း- ဆေးမင်ကြောင်ထိုးခြင်း၊ ဆေးထိုးခြင်း၊ နားဖေါက်ခြင်းတို့ တွင် အပ်များကို ပြန်၍သုံးခြင်း- ဆေးထိုးအပ်၊ ဆေးထိုးပြွန်များကို ပြန်သုံးခြင်း၃။ လိင်ဆက်ဆံမှု မှတဆင့် ကူးစက်ခြင်းဘီပိုးသည် ရောဂါရှိသူနှင့် အကာအကွယ်မသုံးပံ လိင်ဆက်ဆံပါက ကူးစက်နိုင်သည်။ဘီပိုးသည် အစာနှင့် ရေမှ မကူးစက်နိုင်ပါဘီပိုးကူးစက်မှုနှင့် ပါတ်သက်လျှင် အယူလွဲမှုများ ရှိပါသည်။ဘီပိုးသည် အောက်ပါ အချက်များမှတဆင့် လုံးဝမကူးနိုင်ပါ။- အစာ၊ ရေ အတူတူစားခြင်း- ပန်းကန်၊ ခွက်၊ ဇွန်း ခက်ရင်း အတူတူသုံးခြင်း- နေ့ တဓူဝ ပုံမှန် ထိတွေ့ ဆက်ဆံခြင်း- ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာချေခြင်း- ဖက်ရမ်း နမ်းရှုတ်ခြင်း- နို့ချို တိုက်ကျွေးခြင်းအကယ်၍ ဘီပိုးရှိပါက သင့် ကိုယ်သင် နှိမ့် ချ ဆက်ဆံခြင်း၊ လူတော သူတော မတိုးခြင်း၊ အားငယ်ကြောက်ရွံ့ ခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ဘီပိုးရှိပါက သင်ဘာလုပ်သင့် သလဲ။ဘီပိုးရှိ မရှိ စစ်ဆေးပါ။သင်ကျန်းမာပုံပေါက်နေစေကာမူ၊ ပုံမှန် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။သင့် ဆရာဝန်ကို အောက်ပါ သွေးနှင့် ဓါတ်မှန်စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုပါ။ Every Test Screens for ခြောက်လတခါ အသည်းအင်ဇိုင်းစစ်ဆေးမှု(သွေးစစ်)အသည်းကင်ဆာစစ်ဆေးမှု(သွေးစစ်) အသည်းပျက်စီးမှုအသည်းကင်ဆာ တစ်နှစ်တစ်ခါ တီဗီ ဓါတ်မှန် စစ်ဆေးမှု အသည်းကင်ဆာ အကယ်၍ သင့် တွင် အသည်းခြောက်ရောဂါ (သို့ မဟုတ်) မိသားစုတွင် အသည်းကင်ဆာဖြစ်သောသူ ရှိပါက တီဗီဓါတ်မှန် ခြောက်လ တစ်ကြိမ်ရိုက်သင့် ပါသည်။ စောစောသိပါက အသည်းကင်ဆာကို အောင်မြင်စွာ ကုသနိုင်ပါသည်။ဘီပိုးရှိသောလူတိုင်း ဆေးကုသမှု ပြုရန်မလိုပါ။သို့သော် အသည်းအင်ဇိုင်း တက်နေပါက အသည်းပျက်စီးမှု စတင်နေပြီဖြစ်သောကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ် နှိမ်နှင်းဆေးများဖြင့် ကုသခြင်း စတင်နိုင်ပါသည်။အသည်းရောင်ဘီပိုးပျောက်သောဆေး မပေါ်သေးစေကာမူ ထိရောက်မှန်ကန်သော ကုသမှုသည် အသည်းကင်ဆာနှင့် အသည်းပျက်စီးမှု ကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ သင့် ဆရာဝန်ကို အစာနှင့် ဆေးဝါးအဖွဲ့ ကြီးမှ အတည်ပြုသော ကုသမှုများကို မေးမြန်းပါ။ သင့် ကို အသည်းကင်ဆာဆေးဝါးများ စတင်မည်ဆိုပါက ဘီပိုးကုသမှုပါ တခါထဲ ရရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဘယ့် ကြောင့် ဆိုသော် ဘီပိုးထကြွမှုနှင့် အသည်းပျက်စီးမှု ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။အသည်းရောင် ရောဂါ အေ ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။အရက်သေစာ မသောက်စားပါနှင့်သင့် ချစ်သူကို ကာကွယ်ပါ (အကာအကွယ်နှင့် လိင် ဆက်ဆံပါ)သင့် မိသားစု၊ သင့် ချစ်သူကို ဘီပိုး ရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီး ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးပါက ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။သင်ကိုယ်တိုင်ရှိပါက မွေးကင်းစ ကလေးကို ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး အမှတ်(၁) နှင့် ဘီပိုး အင်မြူနိုဂလို ဗြူလင်ကို မွေးပြီးပြီးခြင်းထိုးပါ။ ရောဂါ ကူးခြင်းမှ ၉၅% ကာကွယ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။စောစောသိလေ ပိုကောင်းလေသင် နှင့် သင့် မိသားစု ကို ဘီပိုးရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီးဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။မြန်မာလူမျိုးတိုင်းတွင် ဘီပိုးသည် အကြီးမားဆုံးသော ကျန်းမာရေး ပြဿနာ ဖြစ်ပါသည်။စစ်ဖြစ်အောင်စစ်ဆေးပါသင့် ဆရာဝန်ကို ဆေးစစ်ရန်တောင်းဆိုပါ။ဘီပိုး အန်တီဂျင် - သင့်တွင် နာတာရှည် ဘီပိုးရှိမရှိ ပြပါသည်။ ဘီပိုး ကယ်ရီယာ ဟုတ်မဟုတ်ကို ပြပါသည်။ဘီပိုး အန်တီဘော်ဒီ - သင့် တွင် ဘီပိုး ကာကွယ်နိုင်စွမ်း ရှိမရှိကို ပြပါသည်။ဘီပိုး အန်တီဂျင် သွေးစစ်မှုက သင့် ကို နာတာရှည် ဘီပိုး ရောဂါ ရှိမရှိ သိနိုင်သည်။အကယ်၍ သင့် တွင် ဘီပိုး အန်တီဂျင်၊ အန်တီဘော်ဒီ မရှိပါက သင့် ထံတွင် ရောဂါ ကာကွယ်နိုင်စွမ်း မရှိပါ။ ဘီပိုး ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။ သင့် ကလေးလဲ မွေးကင်းစ အချိန်တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ဖြစ်ပါစေ။ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးသည် သုံးကြိမ် ခြောက်လအတွင်း အစဉ်လိုက်ထိုးရပါသည်။ သင့်ကို ၇ာသက်ပန် ရောဂါ ကာကွယ်မှု ပေးနိုင်ပါသည်။ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးသည် အသည်းရောင် ရောဂါဘီပိုးနှင့် အသည်းကင်ဆာ ကာကွယ်မှု အတွက် အလွန် ထိရောက်သောဆေးဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ ကြီးမှ ပထမဆုံးကင်ဆာ ကာကွယ်သောဆေးဟုပင် တင်စားခေါ်ဆိုပါသည်။ညီညွတ်မှုဖြင့် ဘီပိုးကို ကာကွယ်ပါ။အချက်အလက်များထပ်မံလိုအပ်ပါက http://liver.stanford.edu
Well, Hepatitis C virus is much more serious than Hep B and HIV. Highly infectious as well. Very common in Burma.